Miarahaba anao Jesosy
Dia faly miahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny fiadanan'ny Tompo anie ho aminao sy ny akohonanao. Ny Fiangonana FPVM Fiombonana Tsarahonenana dia miarahaba anao tongasoa.Faly miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2018. Tsy kisendrasendra akory ny ahitanao izao site izao fa ny Tompo no nitondra anao, koa mahazoa hery, mitomboa finoana miaraka amin'ny Tompo, ny Fanahy Masina hanolo-tsaina anao sy hanoro làlana anao amin'izay rehetra hataonao; ka hampanjaka ny teniny ao am-ponao mandrakariva. Tia anao ny Tompo koa mitso-drano anao izahay hahefa be amin'ny asa izay ampanaoviny anao. Herezo ny dia ary aza mierikerika foana, fa ny Tompo momba anao, ary aoka hanao tahaka an'i Paoly manao hoe: "Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato amiko"; ka velona aho hoan'i Kristy, maty aho hoan'i Kristy.
Matio 2:1-3 "Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema an'i Jodia, tamin'ny andron'i Heroda mpanjaka, indreo, nisy Magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan'ny Jiosy? fa nahita ny kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany. Ary nony nandre izany Heroda mpanjaka, dia nangorohoro izy mbamin'i Jerosalema rehetra."
Matthieu 2:1-3 "Après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, aux jours du roi Hérode, voici, des mages arrivèrent de l'Orient à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? … L'ayant appris, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui."
Matthew 2:1-3 "After Jesus had been born in Bethlehem of Judea, in the days of king Herod, well, witches arrived from the East to Jerusalem and said?: Where is king of Jews who was brought into the world? … Having learnt him, king Herod was disturbed and all Jerusalem with him."
Ireo hetsika rehetra
Ny Fiangonana FPVM fiombonana tsarahonenana dia faly miarahaba antsika rehetra. Ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo anie hoaminareo mandrakariva.
Ny fahasoavan'ny Tompo anie hoaminareo mandrakariva, Ilay Andrian'ny Fiadanana hitoetra ao aminareo koa.
Ireo vaovao tsara ho fantatra
Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo,ny Mpitandrina sy ny mpikambana ao amin'ny Biraom-piangonana FPVM Fiombonana Tsarahonenana rehetra dia faly miarahaba antsika rehetra nahatratra ity taona 2018 ity. Ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo anie hoaminareo mandrakariva ety hanjaka amin'ny fiainanareo. Mirary soa anareo rehetra hahefa be amin'ny asan'ny Tompo. Ka ho tena iray sy vava iray ary isaina iray no hoentintsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.
Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny Komitin'ny fananganana dia faly mampahafantatra antsika rehetra, fa efa manomboka ny fanohizna ny asa fananganana ny Fiangonantsika. Efa vita ny tohatra, koa dia manasa antsika rehetra hifanome tànana amin'ny famitana izany. Hanao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, tànana miara-mibata, ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany.
Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ampahafantarina antsika rehetra, fa ny alahadin'ny Mpitandrina ANDRIANTSOA Tahiana mianakavy dia hatao ny Alahady 16 Decembre 2018 izao. Koa andeha isika hanotrona sy hanohana azy ireo amin'izany, Heb 13:7"Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny tenin’ Andriamanitra taminareo; hevero ny niafaran’ ny fiainany, ka araho ny finoany." izany no tenin'Andriamanitra entina isarihana ny saintsika. Andro iray io hanohanana azy sy hitrotrontsika am-bavaka azy ireo.
Faly miarahaba antsika rehetra. Ny SAMITSARA dia faly manasa antsika rehetra hanatrika ny Krisimasin'ny Sampana eto amin'ny fiangonana FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Izany dia manomboka ny Alarobia 12 desambra 2018 amin'ny 5ora hariva. Ary isanandro isaky ny @ 5ora hariva ny anjaran'ny sampana tsirairay avy. Koa tongava maro fa miandry anao ny Tompo.
Ilazana isika rehetra fa ny asan'Andriamanitra izay misy hatramin'izay dia tohizana foana. Mitohy ihan y koa ny fandraisan'ny Mpitandrina olona isaky ny Atalata, Alarobia sy ny Alakamisy ary ny Zoma. Ny zoma io dia miampy fampianarana Soratra Masina amin'ny 2ora tolakandro. Misy ny asa sy fampaherezana isanandro ny Alatsinainy hatramin'ny Asabotsy isaky ny maraim-baovao amin'ny 6ora sy sasany sy amin'ny 9ora. Koa tongava isika fa miandry anao Jesosy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.
Mankasitraka anao, mirary soa ka mahefa be amin'ny asan'ny Tompo.
Ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany
"Il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuages…”(2 Samuel 23:4)
Joba 35:9,10 "Noho ny habeazan’ny fampahoriana no itarainan’ny olona; eny, minananana izy noho ny sandrin’ny mahery, nefa tsy misy manao hoe: Aiza Andriamanitra, Mpanao ahy?"
Tsidiho ihany koa ny site,
fa hampitombo ny aim-panahinao ihany koa izany...
Dia manasa antsika rehetra ihany koa, indrindra fa isika rehetra avy amin'ny faritra Amoron'i Mania mba hitsidika ny "site webntsika"
FPVM Fiombonana Tsarahonenana (Site réalisé par: RANDRIANANDRASANA Roger E-mail:andrianina005@gmail.com)
Jesus Christ est toujours vivant